Ukudibanisa "I-Détruire" Ayiyi "Yonakalisa" isiFrentshi sakho
Ukuxilongwa kwesiNgesi sesiLwimi saseFransi "Asiyi kutshabalalisa"
Xa unqwenela ukuthetha ngento ethi "yachithwa" ngesiFrentshi, sebenzisa isenzi ukutshabalalisa . Intsingiselo yesiTekethi "ukutshabalalisa," le ntsenzi kufuneka idibaniswe ukuba ithathe ixesha elidlulileyo kunye nelo xesha "ukubhubhisa" okanye ikusasa "liya kutshabalalisa." Le ngenye yesingqinisiso sesenzi sesiFrentshi , ngoko isifundo esheshayo siyimfuneko.
Ukudibanisa isiNgesi sesiTransti
I-Détruire isenzi isingeniso , esithetha ukuba ayilandelanga enye yesenzo esivamekileyo sokutshintshana isenzi.
Nangona kunjalo, zonke izenzi zesiFrentshi eziphelayo -iireyi zidibaniswa ngendlela efanayo. Unokusebenzisa iziphelo ezifanayo ozifundayo apha kumazwi afana ne- drive (ukuqhuba) okanye ukwakha (ukwakha) .
Ukudibanisa isenzi, jongana nesigidimi sesifundo kunye nexesha elifanelekileyo lesivakalisi sakho. Ngokomzekelo, " ndiyichitha " " ndiyichitha " kwaye "siya kutshabalalisa" " siyachitha ."
kutshabalalisa kutshabalalisa kutshabalalisa
ukutshabalalisa zichithe ukutshabalalisa
bulala i-détruiront kutshabalalisa
Ukuthatha Inxaxheba Kwangoku kwi- Détruire
Ukuthatha inxaxheba ngoku ngokutshabalalisa kuyonakalisa. Ingasetyenziselwa njengesigqibo, i-gerund, okanye isibizo kunye nesenzi.
Ixesha elidlulileyo lingaboniswa ngokungafezekanga okanye i- passé compé . Ukwenza olu hlobo lokugqibela, qalisa ngokudibanisa isenzi esincedisayo , uze udibanise inxaxheba ekudlulileyo .
Ngokomzekelo, " nditshabalalisa " " ndiyitshabalalise " kwaye " siyichitha " " siyichitha ."
Eyona ndlela elula yokuzidibanisa izifundo zokufunda
Phakathi kwezinto ezilula kunye neziqhelekileyo zokuqhawula izidalwa zenziwayo ziyimiziselo yesenzo esichaza isantya sokungaqiniseki kwisenzo sokutshabalalisa . Ukuzithoba kuyimzekelo epheleleyo.
Xa eso senzo sithembele kwenye into eyenzekayo, imo yesimo sengqondo isetyenziswe endaweni yoko.
Uya kuhlangana ne-passé elula rhoqo kwiincwadi kunye nezinye zokubhala zesiFrentshi ezisemthethweni. Ukukwazi ubuncinane ukuyiqonda kunye nokuthobela ukungafezeki kuya kunceda ekufundeni kwakho ukuqonda.
je tsha balala kutshabalalisa ku tsha balala kutshabalalisa
kuphela tsha balala kutshabalalisa ku tsha balala kutshabalalisa
il tsha balala kutshabalalisa tsha balala kutshabalalisa
nathi ukutshabalalisa ukutshabalalisa kutshabalalisa ukutshabalalisa
nawe kutshabalalisa kutshabalalisa kutshabalalisa kutshabalalisa
ba bulala kutshabalalisa kutshabalalisa tsha balala
Imiyalelo emfutshane kunye nexesha elixhasayo kunye nezicelo zidinga ifom efunekayo . Xa usebenzisa le, isigama sesigama singasuswa, sishiye nge " detruis " kunokuba " uchithe ."
Ukuchaza ubukhulu kunye nobukhulu ngeSpanish
Ukusebenzisa i-Current Proense Tense
Iinkcazo ezibonwayo zeNgesi nganye yesiNgesi
Uphi i-Mistake e-'Plezlez-You French? '
Ukumiswa kwengcaciso kwiKhemistry
Imfazwe yasePeloponnesiya - Izizathu zeMfazwe
Ukuguquka kwezinto zeBatman Costumes zeHalloween
ABS Brakes kunye neNyaniso
Iqoqo le-Classic Love Poems for Sweetheart Yakho
20 Iimemori ezilungileyo Unokuziva Ulungile ngokuhleka